Unxiba njani iimpahla ezincinci | Amadoda aQinisekileyo
Unxiba njani iimpahla ezincinci
UAlicia tomero | | fashion
Sondela kwizambatho ezincinci njengolunye uhlobo lwefashoni eyasungulwa ngeminyaka yoo-1970, nguSusie Faux. Zizinto ezilula, ezintle, iimpahla ezingathathi hlangothi okanye indlela engcono abanokubizwa ngayo "ayinasiphelo”, Kuba ziye zingabonwa nangaliphi na ixesha lonyaka. Nokuba yeyiphi na indibaniselwano ofuna ukuyenza nezinye iimpahla, ezi mpahla ziya kuyenza ifezeke kwaye icingeleke.
Onke amadoda alula ayathanda ukuba nolu hlobo lwento elula, yengubo yendalo kwigunjana labo. Ngesenzo esilula banokwenza ukuba usuku lonke lubonakale lungenasiphako kuba ukuba ezi zincedisi ziya kuba ngumgangatho, ubuhle buhamba kunye.
1 Iimpawu zempahla encinci
Iimpawu zempahla encinci
Impahla encinci iyabonakala ngokulula nangokulula, kodwa akufuneki nokuba ithiyori itshatyalaliswe ngenxa yoko ikuko. Iinkcukacha zayo zihamba ngaphaya kwendlela ofuna ukuyifumana ngayo kuba inokuba neenkcukacha ezithile ezinokuyenza ukuba ibe ngumlinganiswa ophambili.
Yazi nendlela yokukhetha ezi mpahla Inokufana nokucoceka, ukuba nje azinazo iinkcukacha zokubonakala kunxibile. Ngokudityaniswa nezinye iiseti, kuyabonakala ukuba inokuphinda isebenze ixesha elide kwaye yenza ukuba indoda izive intle kwaye yangoku.
Olu hlobo lweet-shirt ezincinci Baye bavela ngokulula kwabo kwaye ke yiyo loo nto baseta iindlela. Suzixakekisa ekukhetheni ihempe ezinelogo ezinkulu kunye namabinzana amanyumnyezi. Khetha imibala ecacileyo kunye neklasikhi, kunye neetoni ezingathathi hlangothi kwaye ngokuqinisekileyo ayinayo imigca okanye iiprinta. Ezona zintle ngokwenyani zezo zinentamo ye-V okanye ezinentambo emile emise okwe-V.
Ihempe ecocekileyo, entsha, enamalaphu okuphefumla nawendalo, iyakuba ngumphelelisi ogqibeleleyo wokuziva uhlaziyiwe. Ezoqoqosho zizambatho ezingabizi kakhulu kwaye ezinye zenziwe ngecotton organic ukuze ulusu lwakho luyixabise.
Nazi uqinise emilenzeni, uhlobo lwezemidlalo olonwabisayo, olunemibala engathathi hlangothi kwaye emnyama. Indibaniselwano egqibeleleyo yamaxesha amaninzi ekufanele ukuba icwangcisiwe iseti yeengubo ezimbini "ezimnyama + ezimhlophe" okanye "ezimnyama + ezimnyama", isebenza kakuhle kakhulu kuba zinika ukubonakala kobuhle.
Unako kwigumbi lakho lokulala iijini ezithile, njengoko zinjalo iklasi yobomi bonke. Ukuba ufuna ukubheja kumbala othile, kungcono ukuba ukhethe ithoni emnyama, ngokuqinisekileyo iya kukunika iziphumo ezingcono xa uyidibanisa nantoni na.
Iibhulukhwe ezimfutshane nazo ziwela kulo mgca kwaye ezakudala ezingezizo ezemidlalo zezona zilungileyo. Ngokumalunga nobude bayo, kukhethwa ukuba ukhethe iisentimitha ezimbalwa ukusuka edolweni ukuze unyaka nonyaka zilingane nefashoni. Ngokubhekisele kwimibala, kungcono ukhethe ukukhanya kunye nemibala ethulisiweyo.
Baya kuba ngabo ungazukuzama ukubasebenzisela yonke into, ngaphandle kokubasa ejimini, apho kungayi kubakho kunqongophala kwabo yenziwe ngekotoni kunye nomxube wefiber zokwenziwa.
Kuya kufuneka ulibale, njengakwiihempe, ukuthenga ezo zineelogo okanye iimveliso ezincinci. Imibala yakho inokulingana ngokugqibeleleyo ukusuka kumnyama ukuya kwi-navy blue kwaye ziya kudibana ngcono kunakuqala ngeebhulukhwe ezimxinwa okanye i-chinos.
Ukuba uthanda ukunxiba iihempe ungakhetha uhlobo lweOxford, Olu hlobo lunokuba lolulungileyo ukuba ukusikwa kwakho kusondele emzimbeni, kodwa ngaphandle kokuqina kakhulu. Inokulingana ngokugqibeleleyo nayo nayiphi na impahla kuba inokunxitywa phantsi kwejezi.
Ukuba kwelinye icala uyathanda Uhlobo lweenkomo nazo zikhethe kakuhle. Ezihempe zibonakala ngathi azisoze zaphuma kwisitayile kwaye zinokwahlulwa kwabanye ngokubonakala kwazo. Phakathi kwemibala yazo zombini iintlobo zeehempe kungcono ukubheja kwi imibala ekhanyayo emhlophe okanye eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ijezi zeTurtleneck zenza indibaniselwano enesitayile kunye egqibeleleyo. Inokuba zezona zihambelana kakhulu kwaye ziguqule iimpahla zakho nangaphantsi kwebhatyi. Ukuba into oyikhethayo zijezi, kodwa ngaphandle kwekhola ungathenga ezo zenziwe ngokuluka, iinjongo zezo zingafumani ubungakanani obaneleyo. Ngokuphathelele imibala, sinamathela kwimibala efanayo, ukusuka kumnyama ukuya kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka.
Iisuti ziyilelwe ngokukodwa ukuhlala ixesha elininzi lamafashoni, ukuba nje amalaphu alungile. Ukuze isuti ekhethekileyo ivele ngaphandle kokugqitha kweminyaka, ungabheja i-slim fit ibhatyi ezinamaqhosha amabini.
Ezi bhatyi zilingana nazo zonke iintlobo zeblukhwe, nokuba ziibhulukhwe zeebhulukhwe, iilokhwe okanye iilokhwe, kodwa oku kunembonakalo emxinwa. Ubume bayo bunokukhethwa buhle kwaye bungafakwanga, kwaye ngokungakhethiyo kwimibala engathathi hlangothi, emnyama njengemnyama okanye eluhlaza okwesibhakabhaka.
Ngokubanzi Uhlobo lweebhatyi ezinikezelwa yimarike zincinci. Yiya kwezo zingangqinelaniyo kakhulu ukuze uzidibanise neempahla ezityebileyo. Ngokubhekisele kubude babo, banokugqibelela ukuba bafikelela embindini wethanga lomlenze. Iibhatyi zikwangubo ezisisiseko kwaye uhlala ukhetha enye inemibala engathathi hlangothi kwaye ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lokuzoba okanye iileta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » Unxiba njani iimpahla ezincinci
Unxiba njani iimpahla zemidlalo